khabar silo – Page 497 – Khabar Silo
आईएमई पेको कोरोना विरुद्धको अभियानमा अनुष्का श्रेष्ठ
काठमाडौं– विश्वभर फैलिएको महामारीले विश्वका मानव जातीलाई चपेटामा पारेको अवस्थामा मिस वल्र्ड नेपाल अनुष्का श्रेष्ठले नेपालका युवाहरुलाई महामारी विरुद्धको अभियानमा जोड्ने भएकि छिन् । देशका युवाहरुलाई शिक्षित बनाउने र जागृत गराउने यो पहलमा आइएमई पेको सहकार्य हुनेछ । आउँदो ३ हप्तासम्म अनुष्का श्रेष्ठले समकालीन नेपाली आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक र अन्यका बारेमा विभिन्न विज्ञ व्यक्तित्वहरुका साथ […]
अदुवा, पिँडालु र बेसार खेती गर्दै लकडाउनमा भारतबाट फर्केका युवाहरु
दाङ – दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ तेर्छेगाउँमा बँदेल र बाँदरले अन्नबाली खान थालेपछि खेती गर्न छोडिएको थियो । चारैतिरबाट जङ्गलले घेरेको पहाडी भिरालो बस्तीका अधिकांश मानिस आफ्नो जीवन यापनका लागि तराई झरेका छन् । सुरुमा तेर्छेगाउँमा २० घरपरिवारभन्दा धेरैको बस्ती थियो । उनीहरुले आफूलाई चाहिने अन्नपातका लागि खेतीपाती गर्दथे । तर बँदेल र […]
कोरोना भाइरसको त्रास विश्वभर बढेपछि यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर मानिसहरु अनेकौ उपायहरु गरिरहेका छन् । कोहि मास्क, साबुन, पञ्जा, स्यानिटाइजर लगायतका वस्तु जोहो गर्न लागि परेका छन् भने कोहि यसबाट बच्न सकिने अरु उपायहरु खोजिरहेका छन् । कोरोनाबाट बच्न घरभित्रै रहने, साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने र हातले अनुहार नछुने सबैभन्दा […]
कुवेतको शिविरबाट मीनाको प्रश्न- तपाईंलाई थाहा छ हामीलाई लिन जहाज कहिले आउँछ?
कोरोना संक्रमणपछि लकडाउनमा कुवेत सहर। फाइल तस्बिर: एएफपी अर्घाखाँची, अमराईकी मीना थारू गत वैशाख ४ देखि कुवेत सरकारको शिविरमा बस्दै आएकी छन्। कोरोना कहर कुवेतमा पनि उस्तै छ। मीनासँगै शिविरमा बस्ने इथियोपियन साथी मंगलबार आफ्नो घर फर्किंदै छन्। उनीहरूलाई लिन त्यहाँको सरकारले जहाज पठाउँदै छ। साथीहरूले घर जान भनेर फुरूंग पर्दै झोलातुम्ला कसिसके। उनीहरूको खुसी […]
२९ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा थप १३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । कपिलवस्तुमा ६, रुपन्देहीमा ६ र बर्दियामा १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उनीहरुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले जानकारी दिए । कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका […]
कालापानीमा सशस्त्रको फौज लैजान गृहले माग्यो सेनाको हेलिकप्टर
२९ वैशाख, काठमाडौं । कालापानी नजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको फौज राख्न बुधबार नेपाली सेनाको हेलिकप्टर काठमाडौंबाट उड्ने भएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयले सैनिक हवाई महानिर्देशनालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सेनाको हवाई निर्देशनालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि सशस्त्र प्रहरीको फौजसहित बन्दोबस्तीको सामान बोकेर बुधबार दार्चुलातर्फ टोली जान लागेको हो । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को […]
पोखराका होटल मजदुरको तलब सरकारको आर्थिक प्याकेजमा निर्भर
पोखराको एक मात्र पाँचतारे होटल पोखरा ग्राण्डमा सरकारले लकडाउन घोषणा गर्दा केही कोरियाली नागरिक थिए। उनीहरु अन्नपूर्ण आधार शिविर पदयात्रामा गत माघ ४ गते हिउँपहिरोमा परेर हराएका आफन्त खोज्न पोखरा आएका थिए। सरकारले चैत ११ गते लकडाउन घोषणा गरेपछि होटलले नयाँ बुकिङ लिएन, पर्यटक पनि बस्नका लागि गएनन्। लकडाउन पश्चात थप एक साता कोरियाली नागरिक […]
Previous 1 … 496 497 498 … 500 Next